आयुसंस्कार परित्याग दिवसको सन्देश | BodhiTv
आयुसंस्कार परित्याग दिवसको सन्देश
एकातिर मानिसहरु महँगो भन्दा महँगो औषधी खाएर अथवा देश विदेश गएर आफ्नो रोगको निदान खोज्दैछन् भने अर्कोतिर कतिपय मानिसहरु आत्महत्या गरिरहेकाछन्, इच्छामरणको अधिकारको लागि लडिरहेका छन् । जन्मेपछि मानिसले देख्ने एक मात्र सत्य भनेको मृत्यु हो । तारेर तर्दैन भनेर थाहा छ तर पनि एक दिन बढी बाँच्नको लागि लगातार संघर्ष गरिरहन्छ उनीहरु । साँच्चै मानिसहरुलाई जीवन किन प्यारो हुन्छ ?
मानिस जन्मेपछि उसले आफ्नो यश, बुद्धि, सुख, सन्तान धन होस् भन्ने चाहन्छ । यी सबै कुराहरु भएको उसले तबमात्र देख्छ, अथवा उसले यो सब त्यसबेलामात्र भोग गर्न पाउँछ जब उ जिउँदो हुन्छ । यस अर्थमा यी सबै सुख र वैभव भन्दा पनि मानिसलाई नभइनहुने भनेको आयु हो । कसले पो नहाचला र केही दिन बढी बाँच्न ?
भगवान बुद्धको जीवनी कथैकथाले भरिपूर्ण छ । नबुझ्नेहरुका लागि यो रोमाञ्चक वा पट्यारलाग्दो पनि हुनसक्छ तर बुझ्नेहरुका लागि भने उहाँको जीवनीसँग जोडिएर आउने प्रत्येक कथा अर्थपूर्ण छ । आज उहाँको जीवनको २६सय वर्ष पछाडि पनि ती कथाहरुका अर्थका नयाँ नयाँ पाटाहरु खुल्दैछन् । आज यस माघ पूर्णिमा अर्थात् सिलापुन्हिका दिनमा यो एक कथा प्रासंगिक हुनआउँछ ।
त्यो माघ पूर्णिंमाको दिन थियो । एक वशवर्ती नामक मारले भगवान बुद्धलाईै अब चाँडै परिनिर्वाण हुनुस् भनेर प्रार्थना गरेछ । यो प्रसंग एकदम अर्थपूर्ण छ। बुद्धको जीवनमा मार भन्ने तत्व यस्तो हो जसले बुद्धलाई घुमाउरो तरिकाबाट बुद्धत्व प्राप्त गर्नका लागि अधिष्ठान बस्न प्रेरि गरे । यहाँको यस प्रसंगले पनि बुद्धलाई एउटा काम समपन्न भएको जनाउ दिए । पहिले पनि उनले बुद्धलाई यस्तै प्रार्थना गरेका थिए । यसपालि भने बुद्धलाई आफ्नो योजना मुताविक नै यो पृथ्वीलाई त्याग गर्नुपर्ने थियो । त्यसकारण उहाँले भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, “हुन्छ । आजको तीन महिना पछि म परिनिर्वाण हुनेछु ।” यो घोषणा युगान्तकारी थियो । यदि उहाँले चाहनुभएको भए अनन्तकालसम्म बाँच्न सक्नुहुन्थ्यो होला । तर उहाँले आफ्नो शरीरको अन्त्य रोज्नुभयो, सामान्य भाषामा मृत्यु रोज्नुभयो । यसकामले उहाँ संसारबाट बुद्धको भौतिक शरीर अलग हुने संकेत गरिरहेको थियो । यस अर्थमा उहाँले आयुसंस्कार छाडिदिए । संसारमा उत्पन्न भएका सबै संस्कारहरुको क्षय अवश्यंभावी छ भन्ने सन्देश यसैबाट प्राप्त हुन्छ । बुद्धले आफुले जन्म लिएको शरीर त सँधैभरि राखिराख्न सक्दैन यहाँ के चाहीँ नित्य होला र भन्ने शिक्षा उहाँको यस घोषणाले दिन्छ ।
मानिसलाई जन्मेदेखि सबैकुराको मोह हुन्छ । बालबालिकालाई खेलौना, युवायुवतीलाई विपरित लिङ्गीप्रति र वृद्धवृद्धालाई धनसम्पतिप्रतिम ोह हुन्छ भन्ने चलनै छ । यो मोह नै त हो दुख को कारण । अरु सबै मोहको उपचार होला, तर शरीर वा ज्यान वा प्राणप्रतिको मोह नमरुन्जेलसम्म रहिरहन्छ । यसबाट मुक्ति त्यति सजिलो छैन । यो एउटा मात्र हुन्छ प्रत्येक व्यक्तिका लागि, एउटाको बदलामा अर्को पाउन सकिन्न । अनि यो नभएका त्यसले भएपनि काम चलाउँछु भन्न पनि सकिन्न । त्यसकारण ज्यानको माया सबैभन्दा ठुलो माया हो । सामान्यजनको नजरमा यस्तो देखिन्छ — सिद्धार्थ क्ुमारलाई राजपरिवार, राजदरवार र चक्रवर्ती राजा हुने अवसर त्याग्न त्यति गाह्रो भएन होला, बुद्धलाई आयु संस्कार त्याग्न त्यति गाह्रो भयो होला ।
बुद्धको यो त्याग यस जीवनकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण त्याग थियो । बौद्ध साहित्यमा त बुद्धले यस घोषणा गर्ने बितिकै भुकम्प गएको भन्ने समेत उल्लेख छ । यसैबाट पनि बौद्धहरुले यस घोषणा अथवा आयुसंस्कार त्यागलाई बौद्धमार्गीैहरुले कति महान कार्यका रुपमा लिन्छन् भन्ने देखाउँछ । बाँच्न सक्नेले पनि अब म तीन महिना मात्र बाँच्ने भनेर घोषणा गर्नु भनेको त्यागको पनि सबैभन्दा माथिल्लो तहको त्याग हो । यहाँ एकपल्ट गुमाएर फेरि पाउन नसक्ने देह वा ज्यानको त्यागलाई बुद्धले सहज ढंगले आत्मसात गर्नुभएको कथालाई प्रतीकात्मक रुपमा देखाइएको छ । तर हामी यहाँ आज छोडेर आजै पाउन सकिने रिस, राग, घमण्ड, अन्धविश्वास समेत पनि त्याग गर्न सकिरहेका छैनौं ।
मानिसले संसारमा जन्म लिन छोड्दैन । मृत्यु पनि सँधै पछि पछि आइरहन्छ । हामी सबै कुरासँग डराउँछौं किन भने हामी मर्न डराउँछौं । आखिर के छ जीवनमा? कति बाँचेपछि मान्छेलाई बाँच्न पुग्छ होला ? भोलि छोड्नुपर्ने देह आज छोड्छु भन्न किन सकिन्न? आयु त्याग त सबै भन्दा ठुलो त्याग हो । जीवन त्याग्न सक्नेले अरु जीवनभन्दा पनि क्षणिक कुराहरु त्याग्न सक्छ । आजको यस दिनको सन्दोश यही हो जस्तो लाग्छ ।
साँच्चै बौद्धहरुमध्ये पनि धेरैजनालाई यस माघपूर्णिमाका दिनमा बुद्धले आयु संस्कार त्याग गर्नुभएको भनेको समेत थाहा छैन । अब थाहा भएकाहरुले पनि बुद्धले आयुसंस्कार त्याग गर्नु भनेको हामीलाई पनि आफ्नो शरीर र शरीरलाई क्षणिक सुख दिनका लागि हामीले गर्नुपर्ने व ागर्नजाने सबै प्रकारका नराम्रा कामहरु र आसक्तिपूर्ण इच्छाहरुलाई त्याग गर्ने प्रेरणा लिने दिन को भनेर झन् कतिलाई थाहा होला ? अब थाहा भएर पनि त्यस आसक्तिलाई त्याग गर्न नसकेर सतही ज्ञानको प्रचार गरेर पण्डितहरुको त कुरै नगरौं ।
नेपालमा पनि सानो ठुलो तहमा अन्य बौद्ध दिवसहरु जस्तो आयुसंस्कार दिवस पनि कतै कतै मनाइन्छ माघ पूर्णिमाकाे दिनमा । बुद्धले आयुसंस्कार त्याग गर्नुभएको कथा सुनाइन्छ । तर त्यस प्रसंगले हामीलाई के सिकाउँछ भनेर स्पष्ट पारिदिने, अथवा हामीमा पनि यस क्षणक्षण बदलिरहने जीवन अनि फोहरमैलाले भरिपूर्ण शरिरप्रतिको माया वा आसक्ति अर्थहिनहो भनेर बुझाइदिने ज्ञानी बौद्धहरुको अभाव छ । यस अभावको पूर्तिं चाँडै हुने, बुद्ध केबल नारामा मात्र सिमित नरही जीवनलाई नै बौद्ध बनाउने प्रेरक व्यक्तित्वको आगमन चाँडै हुने आशासम्म लिन सकिन्छ ।